Ny fomba Hitsena ny Vehivavy ao Shina - Ny Fomba Tsara indrindra ao Azia ny Fitiavana Toerana
Ny fomba Hitsena ny Vehivavy ao Shina — Ny Fomba Tsara indrindra ao Azia ny Fitiavana Toerana
Mety efa tonga saina fa ny hafatra no tena zava-dehibe ianao rehefa mifampiraharaha amin’ny ny vehivavy. Noho izany, ianao vao nahita Filipinas ary dia variana amin’ny roa, ny kolontsaina ary ny hery anaty. Fivoriana ny vehivavy amin’ny ankapobeny dia mety ho sarotra, nefa izany dia mety ho tena sarotra rehefa misy sakana apetraky ny teny sy ny sakana ara-kolontsaina izay miaro anao tsy ho afaka miditra be dia be ara-tsosialy faribolana. Na izany aza, ny fivoriana sy ny fiarahana vehivavy Shinoa kokoa noho ny very maina ny ezaka, satria izy ireo dia afaka ny ho tena tsara fanahy sy tsy nivadika namany raha oharina amin’ny sasany ny Tandrefana namany. Izany tsy milaza fa tsy voatery na inona na inona ratsy amin’ny Tandrefana ny vehivavy, izany fotsiny fa angamba ianao hanana fahafahana tsara kokoa ny mahita ela-fifandraisana maharitra raha toa ka misafidy ny daty Shinoa ny vehivavy. Eny, mety ho sarotra ny mahita ny lalaom-hook-up ao Shina noho ny any amin’ny tany Tandrefana izay vehivavy dia tena»mahazo vahana»firaisana ara-nofo, saingy izany karazana avy amin’ny faritany Sinoa kolontsaina dia mbola tena nentin-drazana sy ny vehivavy indrindra fa te-hifantoka amin’ny marin-toerana ny fitadiavana vady mba hamorona ny marin-toerana ny fiainana ho an’ny tenany. Ny iray be ahiahy mazava ho azy, dia izao: Raha toa ka tsy manana fifandraisana ara-tsosialy ao Shina, ahoana ianao no mba ho afaka ny hahita ny vehivavy eo amin’ny toerana voalohany. Toy ny ankamaroan’ny vehivavy Sinoa vehivavy tia ho nampahafantarina ny amin’ny olona iray izay efa vetted noho ny namana na olom-pantatra. Soa ihany, ianao dia afaka bypass ny sasany ny olana anefa izany ao anatin’ny fomba samihafa. Andeha hojerentsika ny sasany ny fomba samihafa mba hihaona vehivavy ao Shina: fomba Iray mba hihaona vehivavy ao Shina dia ny mampiasa ny sasany farany dikan ny»andro lalao»teknika. Tsy maintsy ho farany noho ny mazava ho azy ianao rehefa mifandray amin’ny hafa kolontsaina. Ny fomba iray dia afaka manao izany raha manana ny herim-po fotsiny mangatsiaka manatona ny ankizivavy izay meandering manodidina ao amin’ny valan-javaboary na eny an-dalambe. Ny toeram-pivarotana koa tsy ratsy toerana ny mahita tovovavy hihaona, mazava ho azy fa izany rehetra izany mangatsiaka manatona maka ny sasany tsinay sy ny fahafahana miatrika ny tsindraindray (na tsy dia matetika) fandavana. Izany dia manampy ny mahafantatra ny sasany Sinoa ihany koa, saingy tsy tanteraka ilaina. Tsarovy fotsiny ny fihetseham-po teo amin’ny masiaka raha oharina amin’ny fomba fomba Tandrefana ny ankizivavy. Anao koa te-ho tonga eny amin’ny maha-politer, satria io no tsy nahita araka izay mety ho fahalemena ny fomba izany dia indraindray any Andrefana, ary raha ny marina dia handresy ianao hevitra sasany. Ny iray hafa, mety ho fomba tsara kokoa mba hahita ny tovovavy mandritra ny andro dia ny mampiasa fanampiana kely avy amin’ny teknolojia. Toy ny hafa ankehitriny amin’ny kolontsaina, ny vahoaka Shinoa ny fitiavana ny tambajotra sosialy ny fampiharana, ary iray amin’ireo malaza indrindra amin’ireny dia ny WeChat. Tsy izany ihany no hamela anao mba hanampy ny namany sy hanao ny mahazatra ny zavatra mety manantena ianao fa afaka ny ho namana vaovao amin’ny alalan’ny ny geo-toerana fahaiza-manao. Vao nanangana ny mombamomba azy, napetraka ny fampiharana ny mahita tovovavy akaiky anao, ary ianao eo amin’ny raharaham-barotra. Mazava ho azy, rehefa afaka izany, dia handeha amin’ny mahazatra hafatra dingana sy ny fametrahana ny tao-olona ny fivoriana. Izany no tokony hatao mba mihaona amin’ny olona araka ny ela araka izay azo atao ny rano indray mitete misy ankizivavy izay toa vao ho liana amin’ny niady hevitra be dia be sy hitandrina ny fanaovana fialan-tsiny momba ny fihaonana amin’ny olona, toy izao no azo antoka fa fotoana-wasters. Rehefa dinihina tokoa, dia tsy nandeha ho an’i Sina dia ny mba hahita ny penina pal, dia ianao. Toy ny hoe manantena, misy ihany koa ny barany sy ny toeram-pandihizana goavana ao amin’ny tanàna Shinoa.
Io no tanàna lehibe amin’ny miroborobo nightlife fa amin’ny ankapobeny namana vahiny, ary ao ihany koa feno indrindra ny vehivavy tokan-tena fotsiny, momba ny any an-tanàna rehetra.
Koa, raha toa ianao mitady aria e
mety fifandraisana na dia iray monja ny iray-alina mijoro, ny klioba na ny fisotroana dia ny toerana mba hahitana izany. Fa tsy samy hafa loatra amin’ny kolontsaina Tandrefana ao amin’io lafiny io ny zazavavy izay vao mitady adventure any amin’ireo karazan-toerana, sy ny tovovavy izay mitady ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana eo miezaka ny tsy azy ireo. Ny hany olana eto dia ny hoe ny ankamaroan ny fisotroana mendrika ny fitsidihana dia ho karazana lafo vidy, indrindra fa raha ianao mitady vehivavy tokan-tena, tsy miankina, sy fotsiny te handany fotoana miaraka amin’ny lehilahy iray ny hariva. Ny zavatra iray hafa mba hitady fa maro ny fikambanana ao amin’ireo tanàn-dehibe dia feno ny vahiny ny tovovavy ihany koa.
Raha tsy manahirana anareo, dia mandeha mialoha
Raha fotsiny ianao te-hampiasa ny aterineto lalao-mpanao mba hahita ny ankizivavy Shinoa ho amin’ny daty, dia afaka manao izany koa. Ny iray amin’ireo tombony eto dia ny hoe tsy maintsy mandeha manodidina ny tanàna, rehefa nikaroka zazavavy rehetra izay hitanao mahaliana sy hahazo nandà na mety hampahatezitra ny olon-tiany raha izy no tsy tokana. Amin’ny foto-pisainana, ny zazavavy rehetra izay mihaona amin’ny mampiaraka toerana tokony ho azo, ary mitady ho an’ny olon-tiany, ka izany rehetra izany dia ho kely ny olana. Mazava ho azy, iray tombon-dahiny dia tsy maintsy hiatrika flakes izay milalao lalao ary ianao koa ho mifaninana amin’ny iray tapitrisa hafa ry zalahy. Ao anatin’izany rehetra izany, aza, satria mampiaraka dia isa lalao, ianao indraindray dia tsara kokoa ny mampiasa ny mampiaraka toerana satria izany dia manome fahafahana hahazo kokoa ny vehivavy noho ianao dia mbola ho afaka mihaona amin’ny olona. Ankoatra izany, raha mifidy ny mampiaraka toerana manokana fa manjohy ny vahiny izay te-hihaona vehivavy Shinoa, dia fantatrao fa ny fanantenana efa liana amin’ny vahiny ny olona. Raha amin’izao fotoana izao any Shina, avy eo dia manosika mba hihaona ny zazavavy haingana araka izay azo atao. Omeo azy ny isa an-tariby, ny sms manomboka haingana araka izay azo atao, ary manaova drafitra mba hihaona.
Ny ela miandry anao, ny kokoa azo inoana fa izy no handeha ho very tombontsoa
Na dia izy toa saro-kenatra tamin’ny voalohany, izy no tena ihany no liana amin’ny nofo sy ra ny olona, tsy ny lahatsoratra ao amin’ny varavarana lamba, ka handeha ianao mba te ho manana azy mahita anao izany rehefa avy hatrany araka izay azo atao. Amin’ny farany, dia misy fomba maro mba hihaona vehivavy ao Shina, saingy ireo dia angamba ny telo safidy tsara indrindra, raha vaovao ianao ny firenena (na dia vao ny famangiana isan -) sy ny tsy manana tambajotra sosialy mbola. Ny mazava ho azy, mahita ny vehivavy amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy, na amin’ny alalan’ny fitsidihana ny match-mpanao raha toa ka ny vadinao fa tianao, dia tsara, fa indraindray dia tsy manana izy fa lafo vidy ianao rehefa voalohany mahafantatra Shina
Vehivavy shinoa Mampiaraka Vietnamiana vady tsara Tarehy Filipina Ankizivavy Aziatika tokan-tena isan'andro →